Meles Zenawi oo la filayay inuu Sabtidii lasoo dhaafay furo shir looga hadli lahaa iskaashiga iyo horumarinta dalalka Afrika ayaa ka qaybgalin shirkaas. Laakiinse madaxweynaha dalka Sinigaal Macky Sall ayaa furay shirka isagoo sheegay in Meles uusan xaalado caafimaad awgood uga soo qaybgalayn shirka.
Telefishinka dalka Itoobiya ayaa sheegay in xaaladda caafimaad ee Zenawi ay wanaagsan tahay, basle shabakad ay mucaaradku leeyihiin ayaa qortay in Meles laga daweynayo xanuun daran oo uu qabo.
Dowladda Itoobiya weli kama aysan hadlin arrinta, iyadoo ay noqonayso markii ugu horreysay oo Meles Zenawi uu ka baaqdo shirka Midowga Afrika tan iyo sannadkii 1991-kii oo xukuumaddii Col. Mingiste Haile Mariam laga tuuray xukunka.
Ra'iisul wasaraha Itoobiya Zenawi ayaan sidoo kale ka qaybgalin shir baarlamaanka Itoobiya uu yeeshay toddobadkii hore, kaasoo lagu waday inuu ka jeediyo hadal ku saabsan miisaaniyadda dalkaas.
Lama sheegin halka uu ku sugan yahay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya, wuxuuna horay u sheegay inuu xilka ka dagayo marka la gaarao sannadka 2015, kaddib markii uu ku guuleysatay doorashadii dalkaas ka dhacday sannadkii 2010.